Fakana am-bavany nitera-doza :: Lehilahy voatsindron’antsy tao amin’ ny biraon’ny polisy • AoRaha
Fakana am-bavany nitera-doza Lehilahy voatsindron’antsy tao amin’ ny biraon’ny polisy
Nihoson-dra tao amin’ny biraon’ny Kaomisarian’ny polisy any Ambanja ny lehilahy iray avy natao famoto­rana, tamin’ny marainan’ny sabotsy lasa teo. Nisy antsy nitsatoka teo amin’ny tratrany, tandrify ny fony.
“Nentina haingana teny amin’ny hopitaly izy saingy tsy tana ny ainy, taorian’izay. Heverina ho nanindrona antsy ny tenany io lehilahy io”, hoy ny polisy any an-toerana.
Nandefasan’ny polisy taratasy fiantsoana hatao famotorana amina raharaha fisolokiana lavanila ireto olona telo mpihavana. Nalaina am-bavany tsirairay izy ireo. “Vita ny famotorana ny olona voalohany. Nahavita ny anjarany ihany koa ilay lehilahy faharoa, ka nasaina niandry ny mpanao famotorana nanao tatitra tamin’ny lehibeny. Minitra vitsy taorian’izay no hita nitsirara sady nihoson-dra teo ilay lehilahy”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny polisy.
Teo ihany dia nanao fana­dihadiana momba ny antsy nanindrona an’ity lehilahy ity ny mpitandro filaminana. “Fantatra fa an’io lehilahy io ihany ny antsy nahafaty azy, izay fitondrany miasa ka entiny ao anaty kitapony, araka ny nambaran’ireo olona roa niara-natao famotorana taminy. Mety ho namono tena tamin’izany izy”, hoy ihany ny polisy.
Ady amin’ny famotsiana omby Voasambotra ireo delege telo sy veterinera iray
Fisafoana Mpandroaka omby halatra nifanehitra tamin’ny zandary
Fandrobana amin’ny alina Sarona ireo mpanendaka mpividy fanafody
Fifandonana fiara sy môtô
Voina am-perinasa :: Mpiasa roa lahy maty tototry ny tany